ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ (၁၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ်ကော်မတီအစည်းအဝေးသို့ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် တက်ရောက်
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၂) ရက်နေ့မှ (၁၄) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသည့် (၁၁)ကြိမ်မြောက်အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ်ကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ စီမံကိန်းနှင့် ....
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ (၇) ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ကုန်သွယ်မှုစာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီ Virtual အစည်းအဝေးသို့ ပါဝင်တက်ရောက်
၂၀၂၁ ခုနစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့မှ ၁၄ရက်နေ့ထိ
(၇) ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ကုန်သွယ်မှု စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ကော်မတီ Vi ....
အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်တွင်ပါရှိသည့် ညွှန်ကိန်းများနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုး မှု ပန်းတိုင်များဆိုင်ရာတွင်ပါရှိသည့် ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကိန်းများ၏&nbs ....
၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဖွားသေစာရင်းအင်း ပုံစံ(၈)မျိုးအား ရိုက်နှိပ်ချုပ်လုပ်ရန် တင်ဒါဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက်၊ နံနက် (၁၀:၀၀) ....
စာရင်းအင်းအချက်အလက်မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေး ဗဟိုကော်မတီ (၁/၂၀၂၁) အစည်းအဝေးကို ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နို ....
အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ ကနဦးလိုအပ် ချက် စစ်တမ်းကောက်ယူရေး၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတည်ပြုရေးနှင့် လိုအပ်ချက်များဆန်းစစ်ဖော်ထုတ် ရေးလုပ်ငန်းကေ ....
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးထွန်းဇော်နှင့်အဖွဲ့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟိုစာရင် ....
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးထွန်းဇော်နှင့်အဖွဲ့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းမျ ....
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးအလုပ်သမား ပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ စာရင်းကောက်ယူရေး လုပ်ငန်းကော်မတီအစည်းအ ....
(၂၄-၁၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် Virtual Meeting ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ပ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် စာရင်းအင်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်စေရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဗဟ ....
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့တွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့မှ (၁၀) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသည့် (၁၀)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံအသိုက်အဝန်း စာရင်းအင်း စနစ်ကော်မတီအစည်းအဝေးနှင့ ....
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ကမ္ဘာ့စာရင်းအင်းနေ့ ( World Statistics Day – 2020 ) အခမ်းအနား (Virtual Event) ကို ယန ....
စီမံကိန်း ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအစိုးရ၏ အကူအညီဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် The United Nations University World Insti ....
မြန်မာနိုင်ငံအသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်း (၂၀၁၉) အစီရင်ခံစာမိတ်ဆက်ပွဲ Virtual Launch အခမ်းအနားကျင်းပ
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ အစိုးရ၏ အကူအညီဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် The United Nations Unive ....
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံး အဆောက်အဦသစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟိုစာရင်း အင်း အဖွဲ့ရုံး အဆောက်အဦသစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၅) ရက်နေ့တွင် တိုင်း ....
စာရင်းအင်းကဏ္ဍ ဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ Virtual အစည်းအဝေး(၁/၂၀၂၀) ကျင်းပ
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှဦးဆောင်၍ စာရင်းအင်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ Virtual အစည်းအဝေး(၁/၂၀၂၀)ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၀) ရက်နေ့ ....
“Market Price Monitoring Mobile Data Collection သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် Mobile Tablet များလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနား” ကျင်းပ
စားသုံးသူဈေးဆနှုန်းတွက်ချက်ရန်အတွက် ဈေးနှုန်းများကောက်ယူရာတွင် Mobile Tablet ဖြင့် ကောက်ယူစုဆောင်းသည့် စနစ်တစ်ခုထူထောင်ရန်၊ နည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ ဈေးနှုန်း စာရင်းအင် ....
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ (၆) ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ကုန်သွယ်မှု စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီ Virtual အစည်းအဝေးသို့ ပါဝင်တက်ရောက်
(၆) ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်စည်ကုန်သွယ်မှု စာရင်း အင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ကော်မတီ Virtual အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၆)ရက်နေ့ နံနက် (၈:၃၀) နာရီတွင် Go ....
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁၅)ရက်
မွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစာရင်းဇယားများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၁/၂ ....
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ကပ်ရောဂါ Covid-19 ဖြင့် သေဆုံးမှုများကို WHO မှ သတ်မှတ်ထားသည့် စံနှုန်းများအတိုင်း ICD coding ပြုလုပ်သွားနိုင်ရန်၊ သင်္ကေတ ရေးသွင်းသူများ၏ စွမ်းဆောင ....
စာရင်းအင်းအချက်အလက် မှန်ကန်ရေးနှင့်အရည်အသွေးပြည့်ဝရေး ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး (၁/၂၀၂၀) ကို ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ....
ကလေးအလုပ်သမားစစ်တမ်း (၂၀၁၉-၂၀၂၀) (အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်လက် လီလက်ကားရောင်းဝယ်ရေး (မော်တော်ယာဉ်နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆင်ခြင်း) ကဏ္ဍ) ကောက်ယူနိုင်ရေးအတွက် မြို့နယ်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့် စာရင ....
အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် လက်လီလက်ကားရောင်းဝယ်ရေး (မော်တော်ယာဉ် နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆင်ခြင်းကဏ္ဍများ) ရှိ ကလေးအလုပ်သမားစစ်တမ်း (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ကောက်ယူနိုင်ရေးအတွက် မြ ....
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့်သည် Italian Agency for Development Cooperation (AICS) ၏ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ Mr. Walter Zucconi အာ ....
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့်နှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် (၄-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့ နေ့လည်၃:၀၀ နာရီတွင် IGCMission ....
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်မည့် အမျိုးသား ညွှန်ကိန်းမူဘောင်တွင် ပါရှိသည့် ....
မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များ လေ့လာခြင်းစစ် တမ်းသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟ ....
စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် World Bank တို့ ပူးပေါင်း၍ Myanmar Living Conditions Survey(2017) Data Documentatio ....
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ နေပြည်တော် ကောင်စီ(ရုံးခွဲ)မှ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာနှင့်သီးနှံ စိုက်ပျိုးမှုစစ်တမ်းကို (၁၇-၂-၂၀၂၀) ရ ....
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့၌ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၀) ရက်နေ့ မှ (၁၁) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် National Implementing Agencies ခေါင်းဆောင်များ၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ ....
မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) မှ ကောက်ယူရရှိခဲ့သည့် အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ပြုစုထုတ်ပြန်သည့် လူမှု-စီးပွားအစီရင်ခံစာ (Socio-economic Report) မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ် (WorldBank)၊ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP) တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ သည့် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း (၂၀၁၇) မ ....
မဲခေါင်-ကိုရီးယားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးငွေကြေးရန်ပုံငွေ (Mekong-Republic of Korea Cooperation Fund (MKCF) အစီအစဉ်ဖြင့် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ....
စစ်တမ်းများနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်း အဝေး (၁/၂၀၂၀) ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မ ....
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနနှင့် ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ရုံးအဆောက်အဦသစ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ ....
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့ရှိ FAMOUS HOTEL ၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့ ....
တတိယအကြိမ်မြန်မာနိုင်ငံကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ စာရင်းကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ
တတိယအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ စာရင်းကောက်ယူရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေးကို (၂၄-၁၂-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ရုံးအ မှတ် (၃၂) အစည်း ....
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှိုင်းယှဉ်မှုအစီအစဉ် (ICP 2020 Round) အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရန်အတွက်‌ ဈေးနှုန်းစစ်တမ်းကောက်ယူမှုဆိုင်ရာသင်တန်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့မှ (၂၃) ရက်နေ့အထိ ....
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့်အဖွဲ့သည် United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN D ....
ဒုတိယအကြိမ် MSDP – NIF Metadata Development အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်မည့် အမျိုးသားညွှန် ကိန်းမူဘောင်တွင် ပါရှိ ....
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့တွင် ၉-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၀-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ မဲခေါင်-ကိုရီးယား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ငွေကြေးရန်ပုံငွေအစီအစ ....
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ် (၃၂) တွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် GIZ အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်း၍ “မြန်မာနိုင်ငံ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ပန်းတိုင် များအား အ ....
“လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအသိပညာမြှင့်တင်စို့” ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ် ဖြင့် စီမံကိန်း ၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့က ကျင်းပသည့် မြန်မာ စာရ ....
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ ....
Data Cleaning နှင့် Data Analysis Training ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခြင်း
Data Cleaning နှင့် Data Analysis Training ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ် (၃၂) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဗဟို ....
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စားသုံးသူဈေးဆနှုန်း (CPI) ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အခြေခံနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အခြေခံနှစ်သို့ ပြောင်းလဲတွက်ချက်နိုင်ရန်အတွက် အလေးပေးရာခိုင်နှုန်း (Weight) တွက်ချက် ....
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) တို့ ပူးပေါင်း၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိ ....
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှိုင်းယှဉ်မှုအစီအစဉ် (ICP 2020 Round) အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) ၏ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့် Training Workshop on Price Survey Sampling Design ....
မြန်မာနိုင်ငံကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီ၏ စာရင်းကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဒုတိယအကြိမ် နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) stakeholder workshop ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃၁) ရက်နေ့တွင် Horizon Lake View Hotel ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စီမံကိန်း နှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်း ....
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ လားရှိုးမြို့၊ ပြည်နယ်ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံးခွဲ အဆောက်အဦသစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ဒုတိယညွှန် ....
စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များ အကောင်အထည်ဖော်ရန် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု ခြင်းဆိုင်ရာ UNSD-DFID စီမံချက်အရ ကုလသမဂ္ဂစာရင်းအင်းဌာန (UNSD) ၏ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့် Statistical Data and Metadata Excha ....
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် UNSD-DFID Technical Mission ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၁) ရက်နေ့တွင် &n ....
အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် လက်လီလက်ကားရောင်းဝယ်ရေး (မော်တော်ယာဉ်နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆင်ခြင်းကဏ္ဍများ) ရှိ ကလေးအလုပ်သမားစစ်တမ်း (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ကောက်ယူနိုင်ရေးအတွက် မြို့နယ်ကြီး ....
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၃၀ အစီအစဉ်အတွက် စွမ်းဆောင်ရည် ခိုင်မာအားကောင်းစေခြင်းဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းစီမံချက်အရ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ....
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့် သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၉) ရက်နေ့မှ (၁၁) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသည့် ( ....
Mobile Tablet ဖြင့် မွေးဖွားမှုနှင့် သေဆုံးမှုကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း နည်းပညာဆိုင်ရာ မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃) ရက်နေ့တွင် မော်လမြိုင်မြို့ရှိ Royal Hinthar ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလု ....
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ပြည်ပပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် စာရင်းအင်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်စေရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့တွ ....
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဉီးဆောင်၍ စာရင်းအင်းကဏ္ဍ ဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၉)ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့၊ နေ့လယ်(၂:၀၀)နာရီတွင် Ho ....
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် အဖွဲ့သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နန်းနင်းမြို့တွင် (၂၀-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့မှ (၂၁-၉-၂၀၁၉) ရက် နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ် ....
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၃) ရက်နေ့တွင် မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့ရှိ Hotel KS ၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် အကဲဖြတ် စိစစ်ခြင်း အသိပညာမြှင့် ....
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအစိုးရ၏ အကူအညီဖြင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးလုပ ....
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် UNESCAP တို့ ပူးပေါင်း၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆိုင်ရာစာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအတွက် အချက်အလက် ထောက်ပံ့ပေးသူများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ....
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်မည့် အမျိုးသားအဆင့်ညွှန်ကိန်း မူဘောင်တွင် ပါရှိသည့် ညွှန်ကိန်းများ၏ Met ....
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ National Institute of Statistics ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သူ Mrs. Hang Lina ဉီးဆောင်သောကိုယ်စာ ....
မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ စာရင်းကောက်ယူရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို (၅-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ဗဟို စာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ် (၃၂) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ....
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေ စစ်တမ်းစီမံချက်၏ Implementation Completi ....
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် ကုလသမဂ္ဂစာရင်းအင်းဌာန (UNSD) တို့ ပူးပေါင်း၍ Workshop on developing and implementingauser engagement strategy for the SDG indicators ဖွင ....
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၉ ရက်
မဲခေါင်-ကိုရီးယားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးငွေကြေးရန်ပုံငွေ အစီအစဉ် အထောက်အပံ့ဖြင့် သင်ကြားဖွင့်လှစ်မည့် “Research Methodology (Pha ....
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ Bloomberg Data for Health Initiative အဖွဲ့တို့နှင့်ပူးပေါင်း၍ ဆေးရုံဆေးခန်းပြင်ပသေဆုံးမှု မှတ်ပုံတ ....
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP) တို့ ပူးပေါင်း၍ “MSDP-NIF တွင် ပါရှိသည့်ညွှန်ကိန်းများ၏ Metadata ဖော်ထုတ်ခြင်း သင်တန်း’&rsq ....